musha nyika dzakabatana NFL Vatambi Travis Kelce Childhood Nhau Plus Untold Biography chokwadi
Yedu Travis Kelce Biography inokuudza chokwadi nezvenyaya yake Yehudiki, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki (Ed naDonna Kelce), Mhuri, Hukama (Kayla Nicole).
Moreso, Hama yemumhanyi (Jason Kelce), Hupenyu hweMunhu, Mararamiro, Muhoro uye mambure akakosha.
Yakareba nyaya ipfupi, isu tinopa yakazara mufananidzo weiyo Hupenyu nhoroondo yaTravis Kelce, inozivikanwa American nhabvu yakasimba magumo eKansas City Chiefs yeNational Soccer League (NFL). Yedu Biography inotanga kubva paukomana hwake kusvika mukurumbira.
Kuti uwedzere yako Bietite chishuwo, tinoisa kumberi nzira yemitambo yezviitiko zvakakomberedza hupenyu hwaTravis Kelce. Chokwadi, iyo mifananidzo iwe yaunoona pazasi inopfupisa yake yehucheche Nhau uye Biography chokwadi.
Travis Kelce Biography - Tarisa Hupenyu hwake kubva paucheche hwake kusvika mukurumbira wake.
Ehe, isu tinoziva iye ndiye Anokurumidza kusimba magumo muNFL nhoroondo kurekodha zviuru zvisere zvebasa mayadhi. Kunyangwe nekuzivikanwa kwake, isu tinonzwisisa kuti vashoma chete ndivo vakaverenga chidimbu cheTravis Kelce yehudiki nyaya uye Biography.
Naizvozvo, isu takafunga kuti zvakakodzera kukuunzira iyo inonakidza nyaya yaTravis Kelce uye nekuparara kweavo ruzivo rwemitambo. Pasina kutambisa nguva, ngatienderere mberi.
Travis Kelce Zvekuchecheche Nyaya:
Kutanga, Travis Michael Kelce akaberekwa musi we 5th waOctober 1989. Akasvika pasi pano neChina chinofungisisa kuna Donna Kelce nababa vake, Ed Kelce.
Mbiri yedu yekuAmerica yakazvarirwa muguta muCuyahoga County, Ohio, rinozivikanwa seCleveland Heights.
Zvekare, Travis Kelce ndiye wechipiri uye wekupedzisira mwana mushure memunin'ina wake, Jason Kelce. Iye nemukoma wake mukuru vese vakatorwa kubva kumubatanidzwa wababa vavo, Ed Kelce naamai, Donna Kelce, vane mifananidzo yatinoratidza pazasi.
Tarira Travis Kelce Vabereki - amai, Donna Kelce nababa, Ed Kelce.
Sezvo vakomana vachikura muCleveland Heights, Ohio, vakomana veKelce vaigara vachikwenya shamwari. Vakazviita zvese sevacheche, vachitamba nhabvu, baseball, nhabvu, hockey yemugwagwa uye kunyange nhabvu.
Vakomana vese vaive vatambi pamwe nevakwikwidzi. Vakapwanya mabhora echando ehoki pamadziro epasi. Saizvozvo, vaitamba chero kuseri kwemba kana mugwagwa pamberi peimba yevabereki vake.
Mufananidzo wehudiki waTravis Kelce.
Zvaiita sekuva neyako diki yemitambo mumba. Iyo yekutyaira yaive yakaita seinodzika mirwi. Kelce nemunin'ina wake, Jason, vakatamba hockey yemugwagwa mumwe-ipapo ipapo.
Ivo baba vavo vaingoda kuti vafare, saka aigara ari panze achibata zvigadzirwa zvemitambo. Travis akatora chikamu mumitambo yebhora kurwisa mukoma wake Jason.
Pavaive vasiri kuparadza imba yavo, Travis akarevera mukoma wake, Jason, kunharaunda.
Chokwadi, zvakakonzera kurwa kwakawanda. Nzvimbo yekurwa ndicho chiratidzo cheudiki hwavo. Kune akawanda zvibhakera zvakakandwa mukurwa kwavo.
Travis akayera mukoma wake, Jason, kutenderedza nharaunda mukati mekurerwa kwavo.
Izvo zvese zvakangobuda kubva kune mumwe munhu kuve ari nani pane mumwe uye mumwe wacho asiri kubata nazvo. Nekudaro, at Cleveland Heights High, hapana kana mumwe wevakomana akatamba chinzvimbo chaaizopedzisira achitamba sepro pro. Jason aive mutsara, Travis, quarterback.
Munguva yechando, Travis akatamba basketball apo Jason aipinda muHockey. Travis akayeuka kuti kutandara nemukoma wake uye vabereki kuseri kwemba zvakamukurudzira kutamba mutambo.
Travis anoti akawana akawanda emitambo yake kubva kuna mai vake. Zvisinei, kukwikwidza kwake kwakagara kuchikurudzirwa nababa vake. Kukanda bhora kutenderera nababa vake kwaive zvese semwana.
Kukanda bhora kutenderedza kwaive zvese kune ramangwana NFL nyeredzi.
Travis Kelce Mhuri Yemhuri:
Vatambi venhabvu havafanirwe kubva kumamirionea dzimba. Nekudaro, chitsama chinodikanwa kutora chikamu mumutambo. Huwandu hwakanaka hwemari buoyancy hunodiwa.
Baba vaTravis Kelce, Ed, semabhizimusi, aive akaenzana nebasa iri. Akatengesa simbi kuti awane chouviri. Zvichakadaro, amai vake, Donna Kelce, vaishanda muBhangi. Fungidzira kuti vaive nezvakakwana kusangana nezvinodiwa zvakakosha mumba.
Travis Kelce Kubva Kwemhuri:
Achitaura nezve mhuri yake, Travis Kelce ane chizvarwa cheAmerica. Akazvarwa kunze kweCleveland, inozivikanwa seWestlake. Iri iguta muCuyahoga County, Ohio, United States.
Iko kune mukana wekuti Travis ane madzitateguru echiJuda. Dzinza rake rechiJuda imhaka yekuti Cleveland Heights akaona kuwanda kwevanhu vechiJuda vazhinji vachisiya Cleveland, kunyanya nharaunda dzeHough neGlenville mukutanga kwema90s.
Guta rakasimudza vanhu vazhinji vanozivikanwa, saDebra Winger, Kevin Edwards, uye kunyange John D. Rockefeller. Nekudaro, pane runyerekupe rwekuti Travis Kelce ndewerudzi rwakasanganiswa (Polish, Chirungu nechiJudha).
Dzinza rake rechirungu raigona kubva kuhukama hwababa vake. Nehurombo, muzukuru wake akanonoka, kunyangwe asati aberekwa Travis nemukoma wake mukuru, Jason.
Zvakare, sekuru vaamai vaTravis vaive Donald Roy Blalock (Helen Henrietta Sadlowsky naRoy Percy Blalock). Pamusoro pazvo, Donald akaberekerwa muOhio. Zvichakadaro, sekuru vaTravis, Roy, aive mwanakomana waWilliam O. Blalock naHattie Lyons.
Helen akaberekerwa muOhio, mwanasikana wevabereki vePoland, John Sadlowsky naHenrietta Olchefsky. Zvakare zvakare, midzi yaTravis Kelce inogona kuteverwa kuburikidza nezita remhuri yake. Zita rekuti Kelce nderaPolish mabviro. Zita racho rinonzi izita renzvimbo muPoland.
Saka nekureva, tinogona kutaura kuti mutambi chizvarwa cheAmerica, Westlake, Ohio chaizvo. Pazasi pane graphical kuratidzwa kwekwakabva mhuri yaTravis Kelce.
Chiratidziro chemhuri yaTravis Kelce.
Travis Kelce Dzidzo:
Akabatana neCleveland Heights yeChikoro Chepamusoro mutaundi rekumusha kwake reCleveland Heights, Ohio. Paaive muchikoro, akabuda semutambi wemitambo mitatu munhabvu, basketball uye baseball. Zvakadaro, akakunda munhabvu.
Travis Kelce aive wemakore matatu tsamba anokunda mukotaback yeiyo Tiger. Akaratidzawo neAll-Lake Erie League kukudzwa mushure mekuita 2,539 yadhi yekukanganisa kwakazara sevakuru.
Travis akaenda kuCleveland Heights yeHigh School mutaundi rekumusha kwake.
Muna 2007, akamhanya 1,016 anomhanyisa mayadhi uye gumi anomhanyisa kugunzva, akakanda 1,523 achipfuura mayadhi, 21 touchdowns, uye masere mapindiro. Vakafunga Travis Kelce mbiri-nyeredzi yekutsvaga neRivals.com.
Kelce akagashira rubatsiro kubva kuYunivhesiti yeCincinnati. Travis akasarudza Cincinnati pane zvinopihwa kubva kuEastern Michigan, Akron neMiami. Saka, Kelce akabatana nemukoma wake, Jason Kelce, uye wekutanga kuruboshwe kurinda maBearcats.
Mutambi weNFL akasarudza iyo Yunivhesiti yeCincinnati pamusoro pezvinopihwa kubva kuEastern Michigan, Akron, neMiami.
Travis Kelce Ekutanga Basa.
Basa rake rekutanga rakatanga achiri kukoreji. Kelce akatora chikamu mumitambo gumi neimwe. Akatamba magumo akaoma uye quarterback kunze kweWildcat kuumbwa muna 11 mushure mekugadzirisa.
Saizvozvo, akaunganidza masere masere kumayadhi makumi mana nemanomwe uye maviri ekugunzva, pamwe nekugashira kumwe kwemayadhi matatu muna47.
Gore rakatevera, Kelce haana kutamba nekuda kwekutyorwa kwezvirongwa zvechikwata. Kelce akanga adzoka nechikwata kuti atange mwaka wa2011 mushure mekushanda kwake kwegore rimwe chete.
Travis Kelce nemukoma wake, Jason, pakutanga kwebasa ravo paYunivhesiti yeCincinnati.
Mumwaka wake wekupedzisira wekushandira pamwe, Kelce akagadza rake rakakwira basa mumabiko (45), achigamuchira mayadhi (722), mayadhi pamabiko (16.0).
Moreso, mukutambira touchdowns (8), iye akahwinawo-yekutanga timu-ese musangano musangano kukudzwa. Kelce akatumidzwa zita rekuhwina muKoreji Nhabvu Performance Performance Tight Kupera kwegore munaKurume 2013.
Travis Kelce Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Iwo maChief akashandura Andy Reid semurairidzi wavo mutsva munguva yemwaka-wekupedzisira. Zvisinei, Reid aiziva naKelce nekuda kwehama yake, Jason Kelce. Kelce akanyorerwa mukutenderera kwechitatu kwegore ra2013 NFL Draft neKansas City Chiefs.
Saka, pazuva re6th raJune 2013, Madzishe akamusayina kune kontrakiti yemakore mana yaisanganisira bhonasi yekusaina.
Akangotora chikamu mumutambo mumwechete munguva yake yerookie nekuda kwekuvhiyiwa kwemabvi. Saka, haana kunyora chero nhamba gore iroro.
Mugore rakatevera, Kelce ndiye aive anotungamira anotambira, aine 862 mayadhi kubva pamatanho makumi matanhatu nenomwe. Akawana Pro Bowl yake yekutanga aine rekodhi yemakumi manomwe nenomwe ekubatwa kwemayadhi mazana masere nemakumi masere nemashanu uye mashanu ekugunzva mugore ra67.
Travis akasaina kontrakiti yemakore mashanu ekuwedzera neChief musi we 29th waJanuary 2016. Akawana zita rake rechipiri Pro Bowl panguva iyoyo. Kuwedzera kwakabuda Yekutanga-timu All-Pro. Mu 2017 Pro Bowl MVP, Travis Kelce naLorenzo Alexander vakabuda vakundi.
Travis Kelce Biography- Kumuka Mukurumbira:
Muna Zvita 2017, Kelce akabuda kubva kune yake yechitatu yakananga Pro Bowl. Akapedza mwaka achibuda nebasa-repamusoro masere achitambira ekugunzva. Kelce akapedza wechipiri pakati peakasimba magumo aine 1,038 ekugamuchira mayadhi, achingoteedzera Gronkowski's 1,084 ekugamuchira mayadhi.
Vezera rake vakamuisa 24th paNFL Top 100 Vatambi ve2018. Zvakare, muna 2020, maChief akakunda Super Bowl LIV vachipesana neSan Francisco 49ers, 31-20. Ndiwo waive mukwikwi wekutanga wechikwata mumakore makumi mashanu. Tarisa zvionekera pazasi.
Shure kwaizvozvo, Mutungamiri Trump vakakoka Madzishe kuWhite House kupemberera Super Bowl kukunda. Chiefs 'quarterback Patrick Mahomes, uyo akatumidzwa zita rekuti Super Bowl MVP yakawedzera kukunda kwekudzoka.
Muna 2021, zvichitevera kuburitswa kwenguva yakareba maChief akasiya Eric Fisher uye nekusiya basa kwaAnthony Sherman mumwaka wekupedzisira, Kelce akazove nhengo yehushe yakarebesa.
Mumutambo weChipiri wechipiri wemwaka vachirwisa Baltimore Ravens, anova magumo anomhanyisa kwazvo munhoroondo yeNational Soccer League yekurekodha zviuru zvisere zvemabasa, achipfuura rekodhi yaRob Gronkowski mumitambo 8,000.
NFL Star inosimudza iyo Vince Lombardi Trophy yeiyo Super Bowl LIV kuhwina.
Travis Kelce Kufambidzana ndiani?:
Muna Ndira 2016, Kelce akaita nyeredzi muE! Varaidzo Terevhizheni yekufambidzana inoratidza inozivikanwa seCatching Kelce. Akahwina akasarudzwa naKelce aive Maya Benberry, uye vakatanga kufambidzana mushure mekunge show yapera muna Kubvumbi 2016.
Sezvineiwo, kudanana kwavo kwakangogara kwenguva pfupi. Benberry akasimbisa kuti vakaparadzana munaJanuary 2017. Zvakare, Kelce akatanga kufambidzana muna May 2017 nemutori wenhau wevaraidzo Kayla Nicole. Haana hukama naye Nicole Kidman. Vaviri ava vakadanana kwemakore maviri akatevedzana.
Travis Kelce naKayla Nicole ndemumwe wevanonyanya kufadza NFL Couples. Vakaroorana vanopedza nguva yakawanda pamwe chete. Kunyangwe hazvo zvakaoma naKelce achifonera Kansas City kumba uye mukadzi wake anogara muLos Angeles.
Zvisinei, vaviri vacho vanoita sevanodanana, uye havanyari kuzviratidzira pasocial media. Vatarise pamufananidzo unotevera.
Trav naKayla Nicole ndevamwe vanonakidza kwazvo maNFL Couples.
Travis Kelce Hupenyu Hwemhuri:
Kubva panguva dzekare, kukosha kwemhuri kwave kusingarambike. Wese munhu anoda chero munhu mumwechete anogona kubata ruoko rwake mukati mehupenyu matambudziko. Ruzhinji rwevanhu vane simba munhoroondo vakashuma kuti rutsigiro rwemhuri yavo rwakavatora kusvika pano.
Zvisinei, vamwe havana mhuri. Vamwe vanobva mumhuri dzakatsauswa. Zvakare, vamwe vazhinji vakashanda nesimba uye vakazviita pamusoro pebasa ravo pasina rubatsiro.
Nekudaro, Travis Kelce akanakidzwa nerutsigiro rwakakura uye kutarisirwa kubva kunhengo dzeimba yake. Panguva ino muBiography yedu, ngatitaurei nezvavo zvakasiyana.
Zvimwe Zvakawanda Nezve Travis Kelce Baba - Ed Kelce:
Baba vaTravis Kelce ndiEd Kelce. Iye mugari weAmerica anofarira zvemitambo. Ed Kelce mutambi mukuru webaseball, basketball uye NFL nhabvu. Uku kukoshesa kukuru kwaEd mumitambo kunofanirwa kuve kwakave chikonzero nei vana vake vaviri vari vatambi nehunyanzvi.
Maererano naTravis Kelce, baba vake vaigara vachitamba bhora nemukoma wake mukuru uye vakaenda navo kumitambo mikuru.
Travis anoshumawo kuti nguva idzodzo dzaive dzakanakisa. Saka, takavaita vekupedzisira nekuve vatambi venhabvu vane hunyanzvi.
Ed Kelce muridzi webhizinesi anotengesa uye anoshandawo nesimbi. Akave akaroora kumoyo wake, Donna. Nhasi, ivo vaviri vane vana vaviri (Jason naTravis). Vana vavo vari vaviri muNational Soccer League (NFL).
Ed Kelce, nevanakomana vake vaviri. Travis naJason.
Zvimwe Zvakawanda Nezve Travis Kelce Vabereki - Amai:
Amai vaTravis Kelce ndiDonna Kelce. Iye anowanzo kugara-pamba-mubereki. Basa rake guru raive rekusimudza mhuri nehanya zvakanyanya. Hapana mubvunzo kuti akabudirira. Akaita basa rakanakisa kugadzira vaviri vatambi vehunyanzvi.
Mifananidzo yaTravis Kelce, naamai vake, Donna Kelce.
Vese vakomana vake vanomuda uye kazhinji vanomushanyira munguva yavo isiri yemwaka. Haakanganwe murume wake, Ed Kelce. Doo akararama hupenyu hunofadza. Waizviziva here? Amai Vake Vakagadzira Misoro yeKukanda Shade kuna Tom Brady mu2018. Ona zvaakatumira mumufananidzo pazasi.
Travis 'Amai, Donna Kelce Akagadzira Misoro yeKukanda Shade kuna Tom Brady mu2018.
Zvimwe Nezve Travis Kelce Mukoma - Jason Kelce:
Travis Kelce haasiye oga mutambi wenhabvu mumhuri yeKelce. Mukoma wake, Jason Kelce, inzvimbo yePhiladelphia Eagles yeNFL. Jason mukwikwidzi weSuper Bowl, ane nguva mbiri Pro-Bowler uye ari maviri-nguva Yekutanga-Team All-Pro.
Jason naTravis vakatamba nhabvu pamwechete kuYunivhesiti yeCincinnati kwemwaka mitatu. Muna 2011, ivo vaviri vakanyorwa. Panguva iyo Eagles yakanyora Jason, Travis akadhindwa neChiefs makore maviri gare gare. Akahwina 2017 Yakavakwa Ford Yakaoma Inogumbura Mutsetse weGore.
Madzishe akasimba magumo Travis neChapungu nzvimbo Jason ndivo vakanyanya kugona hama muNFL. Ivo vaviri vakagara basa ravo rese nezvikwata zvavo kusvika parizvino.
Chisungo chavo chinovaita ivo vatambi vari nani. Sezviri pachena, pavanofurirana, zvinhu zvakanaka zvinoitika. Iyo Kelce Hama Dzinomutsirana Hukuru hweMumwe neumwe.
Jason akaroora musikana wake wenguva refu, Kylie McDevitt. Akasangana nemukadzi wake patinder. Zvadaro, vakaroorana muna Kubvumbi 2018.
Zvichakadaro, Kylie McDevitt mutambi wehockey uye hunhu hwenhau. Vaviri ava vakatungamira zvikwata zvavo kumazita eSuper Bowl.
Jason anogovera mwana mumwe chete nemukadzi wake, Kylie. Mwanasikana wavo Wyatt Elizabeth Kelce akazvarwa pazuva re2nd raGumiguru 2019. Vaviri ava vanogara muOhio nemwana wavo uye Irish Wolfhound.
Jason Kelce anogovera mwana mumwe (Wyatt Elizabeth) nemukadzi wake, Kylie McDevitt.
Zvimwe Zvakawanda Nezve Travis Kelce Vehukama:
Mutambi weAmerican NFL anofanira kunge aine dzimwe hama. Travis Kelce ane mashoma mashoma enhengo dzemhuri parutivi pevabereki vake uye vanun'una, sehama nasekuru, nasekuru nasekuru. Kunyangwe ipapo, isu hatisati tanzwisisa chero chinhu nezvavo.
Uyezve, akarasikirwa nasekuru nasekuru vake kunyange asati azvarwa. Zvakangodaro, sekuru nasekuru vaamai vake vaive Donald Roy Blalock naHelen Henrietta Sadlowsky.
Zvichakadaro, sekuru vake vaamai vaiva Donald Roy Blalock. Uye zvakare, mukwambo wake - Kylie McDevitt. Zvakare nemuzukuru wake wemucheche Wyatt Elizabeth Kelce. Zvakare zvakare, babamukuru vake Big Don uye hama dzake.
Travis Kelce Relatives - kutanga naSekuru vake, Big Don uyezve naambuya vake uye lil hama.
Travis Kelce Hupenyu hweMunhu:
Kunze kwekutamba kwake, kufambidzana kwenguva pfupi, uye nhabvu, Travis Kelce anofarira zvimwe zvinhu zvakawanda.
Iyo Kansas City Chiefs yakasimba yekupedzisira inofarira baseball, Ice-Hockey, basketball uye mitambo yemijaho. Anotsigira NASCAR. Moreso, anoda fashoni, mimhanzi uye imbwa.
Travis Kelce ane hunhu hunofadza. Iye anonakidza kuve naye, uye hapana nguva yakasviba naye. Zvakare, Travis Kelce anotora mukana wevezvenhau kuvharidzira mukaha nevateveri vake vaimbotsigira.
Yake Instagram account chete ine vateveri vanosvika miriyoni 1.5. Anogovera mapikicha kubva pakudzidziswa kwake, kutsigira, snippets yemutambo wake, uye anouya anogadziridza.
Nyeredzi yeNFL, anonakidzwa neIce-Hockey nemudiwa wake, Kayla Nicole.
Travis Kelce Mararamiro:
Kunyangwe hazvo Travis Kelce akawira muchikamu chevatambi vemitambo vane mukurumbira, shasha inochengetedza maitiro akazvininipisa.
Zvakadaro, akapotsa arasa cheki yake hombe yekutanga kuda kubhuroka. Pasinei naizvozvo, akadzidza zvidzidzo zvake mushure mechiitiko chacho. Ona clip inotevera.
Saizvozvo, isu hatigone kuramba kwake kukuru kwemari kukwidziridzwa. Travis Kelce ane imba yakanaka kwazvo. Ane imba yekurara ina muKansas City yeBriarcliff West nharaunda. Travis akaitenga ne $ 995,000. Iine imba yekurovedzera muviri, imba yekugezera waini, uye dziva rakakura kunze.
Imba yacho inouya negaraji iyo inobvumidza Travis kubata mumotokari yake. Kuunganidzwa kwake kwemota dzoumbozha kunosanganisira Aston Martin Vanquish, yemhando yegore ra2014 inokosha madhora mazana matatu ezviuru. Zvimwe zvinosanganisira GMC SUV Rori; iyo modhi ndiyo Terrain ya2014 ($ 20,000).
Ipapo, renji rover inodzoka muna 2015 pamutengo unosvika madhora zviuru makumi mashanu. Zvakare zvakare, ndizvo mota yerudzi rweSUV yakabva kuMercedes Benz inokosha madhora zviuru mazana matatu nemakumi mana nemana.
Collage yeimwe yeTravis Mota neyake $995,000 imba yepamusoro muKansas.
Travis pasina mubvunzo aireva zvakawanda kune maChief quarterback Patrick Mahomes. Naizvozvo, madzishe akaisa mari yakawanda muKelce pamusoro pemakore. Mune 2020, Kelce akawana mari inosvika $ 33.68 mamirioni neMadzishe.
Saizvozvo, muzhizha re2020, Kelce akasaina makore mana, $ 57 miriyoni yekuwedzera, zvinoenderana neNFL.com. Kondirakiti yake neChiefs inosvika kusvika muna 2025. Parizvino, Kelce anenge aita $ 99.93 mamirioni achitamba nhabvu.
Sekureva kwa Celebrity Net Worth, Travis ane mambure anosvika zviuru makumi maviri emamiriyoni emadhora. Mibairo yake haina kuverenga chero zvibvumirano kana mari yaakaita kubva pakuratidzira Kubata Kelce.
Iye zvakare anowana kubva kwakasiyana kutsigira. Zvibvumirano zvake zvinosanganisira zvinotevera zvigadzirwa: Dick's Sporting Goods, L'Homme de Maison, Lokai, Mache Custom Kicks uye Nike.
Travis Kelce Untold Chokwadi:
Nyeredzi yeNFL yakazviisa munhaurirano seimwe yeakanakisa magumo akasimba enguva dzese.
Yedu Biography yaisazove yakakwana pasina zvimwe zvakasarudzika chokwadi. Pazasi pane zvishoma zvinokatyamadza chokwadi chingakweshesa fungidziro yako nezve Kansas City Chief's tight end.
Chokwadi #1: Mataurirwo esurname:
Munguva yegore ra2021, Kelce akati anotsanangura zita rake / ɛkɛlsi / saKEL-ona. Mataurirwo acho ndeyekuti baba vake vanoita zvimwechetezvo kunyangwe vamwe vese vevababa vemba yake vachidana zita iri / kɛls / KELSS.
Zvakare, munin'ina waKelce, Jason, akazotsanangura kuti baba vake pane imwe nguva vakaneta nekururamisa munhu wese anomudaidza 'Kell-ona.' Saka, kugadzirisa munhu wese ari panguva yekuti isu tese tinokwira naEd 'Kell-ona.' ”
Chokwadi # 2: Dhizaina Maitiro:
Pazuva rake repro, Kelce akayera mu6'5 ″, 255 lbs. Akangomhanya 4.61 40-yadhi dash. Haana kusimudza sezvazvinowanzoitika nekuda kwekukuvara kwakapfuura. Travis haana kukwikwidza kuNFL Scouting Combine nekuda kwemitambo hernia.
Travis haana kumhanya neimwe nzira mushure. Akarwara pazuva rake repro mushure mekumhanyisa makumi mana. Zvakare, zvikwata gumi nezviviri chete zvaivepo kuti zvimuone achiridza.
Chokwadi # 3: Mipiro:
Travis Kelce akaita basa rerudo pamwe kana kutsigira masangano anoyamura anotevera: 87 uye Running Boys & Girls Club of America, Tariro yaBraden Yehuduku, Cancer Children's Mercy Kansas City, Michael J. Fox Foundation.
Travis Kelce ikurudziro kuvanhu vazhinji nhasi. Zvakare, anotsigira AIDS & HIV At-Risk/Disadvantaged Youth uye Breast Cancer Cancer Vana.
Akatengera chivakwa chevana vemukati-muguta kubva kuKansas City kuti vadzidze STEMS zvirongwa nehupfumi hwake.
Chokwadi # 4: TV Series:
Akanga ari mukokeri wenhevedzano inonzi Fair and Foul. Icho chiratidziro apo vatambi vanoita mitongo yekukurumidza pane zvese kubva kumitambo yepreseason kusvika kumabiko emwenje.
Inotevera kumusoro ndiyo barbecue-lovin ', slant-nzira-runnin', Kansas City Chiefs yakasimba kupedzisa Travis Kelce. Anoti Anofarira hurukuro dzisina kunaka. Guess isu zvakanaka nazvo? Ona zvidimbu pazasi.
Chokwadi # 5: Mufashoni uye Wekupfeka brand:
Travis Kelce ndiye Stylish Man. Akave Icon yemafashoni mune zvipfeko zvake zvinonakidza pamusoro pemakore. Kuguma kwakasimba kwaChief, icon yemafashoni Travis Kelce akadonhedza kubatana naNike.
Kelce akabatana naNike kuti agadzire yake ye Blazer Mid '77 Vintage naIwe muunganidzwa. Kubatana kwacho kunosanganisira shangu nhanhatu dzakagadzirwa naKelce dzinomiririra zvakasiyana-siyana zvehupenyu hwake uye hunhu.
Iye zvakare ane fashoni brand yake inonzi Tru Colors Brand. Izvo zvese ndezvekuratidza yako Tru Kolors uchiisa pamwechete machira ekupenga uye kugadzira shangu inomiririra iwe!
Travis Kelce ndiye Stylish Man uye Fashoni Icon nemapfekero ake anonakidza.
Tichitarisa kumashure kubva kwatakatanga muBiography yedu, Travis Kelce aingova wekupedzisira-wekutora neKansas City Chiefs. Akasarudzwa kuzadza timu kana paine kukuvara. Nekudaro, nekutamba kunotyisa kunhandare, Travis akawana ruremekedzo rwechikwata chake.
Mukurumbira ndicho chinhu chaakawana chimwe hupfumi hwake. Pamusoro pezvo, nechibvumirano chikuru chekondirakiti inokosha mamiriyoni emadhora. Shandisa tafura iri pazasi kuti uwane ruzivo rwakakwana nezve Travis Kelce.
Zita rizere: Travis Michael Kelce
Zita rekudanwa: Zeus, Vanyoro Hot American Kelce
Zuva rekuzvarwa: 5th Zuva ra Gumiguru 1989
Nzvimbo yekuzvarirwa: Westlake, Ohio, US
Chikwata: NFL (National Nhabvu Nhabvu)
NFL Dhizaini: 2013 (Round 3; Sarudza 63) neKansas City Chief
Dzidzo: Cleveland Heights High Chikoro; Yunivhesiti yeCincinnati
Baba: Ed Kelce
Amai: Donna Kelce
Hanzvadzi konama: Jason Kelce
Hama: Kylie McDevitt (mukwasha), Wyatt Elizabeth Kelce (muzukuru), Sekuru Big Don.
Musikana: Kayla nicole
Hobbies: baseball, basketball, Ice-Hockey, fashoni, mumhanzi uye nemitambo yemijaho (NASCAR).
kukwirira: 6 ft 5 mu (1.98 m)
Net Worth: $ 20 mamirioni (Wemukurumbira Net Kukosha)
Muhoro: $ Miriyoni makumi maviri (33.68)
Tinovimba wakadzidza zvidzidzo zvishoma mukupeta Travis Kelce's Biography uye Childhood Hupenyu Nyaya. Zvechokwadi vakamutora semuchengetedzi. Zvakangodaro, akaramba kuregeredza asi akaedza kupa zvakanakisisa. Tarisa, vamwe vese, sekutaura kwavo, vakave nhoroondo.
Iye zvino, iye matanhatu-nguva Pro Bowler. Zvakare, katatu-nguva yekutanga-timu All-Pro sarudzo. Zvakare, ane rekodhi yeNFL yemwaka yakawanda inoteedzana nemayadhi e1,000.
Akagamuchira magumo akasimba (5) uye rekodhi yemayadhi mazhinji ekugamuchira (1,416) nekupera kwakasimba mumwaka mumwe chete. Saizvozvowo, kusangana ne Mutungamiri Trump mushure mekukunda kwaChief's Super Bowl muna 2020.
Ndinokutendai nekuwana izvi kunyora zvichifadza. Isu tinopa kunyorera kwako kune Yedu Yehudiki Nyaya uye Biography Chokwadi.